Fampahafantarana ireo vokatra IVEN - Tube Fanangonana Rà
Ampoule - Avy amin'ny safidin'ny kalitao namboarina ho an'ny namboarina Ny fantsom-panangonana ra tsy misy fangarony dia karazana fantsom-baravarankely feno tsindry azo esorina izay afaka mahatsapa fanangonana ra be loatra sy filàna ...
Inona no ao amin'ny vahaolana IV?
Ampoule - Avy amin'ny namboarina natao manokana namboarina ho an'ny kalitaon'ny safidy tsy vita amin'ny kitapo malefaka IV, ny tsipika famokarana vahaolana dia manolo tavoahangy fitaratra, tavoahangy plastika ary infusions lehibe amin'ny sary mihetsika PVC, manatsara be ny qualit ...
Ampoule - Avy amin'ny safidin'ny kalitao namboarina
Ampoule - Avy amin'ny safidy voafetra ho an'ny namboarina namboarina dia ny ampoule no vahaolana famonosana mahazatra be mpampiasa eran'izao tontolo izao. Izy ireo dia tavoahangy kely voaisy tombo-kase ampiasaina hitehirizana ireo santionany amin'ny rano sy ny solid ...
Ny tsipika famokarana fantsom-bokatra ra dia amidy erak'izao tontolo izao
Amin'ny ankapobeny, ny faran'ny taona dia fotoana be atao foana, ary ny orinasa rehetra dia mihazakazaka mandefa cargos alohan'ny faran'ny taona mba hanomezana fahombiazana amin'ny faran'ny taona 2019. Ny orinasanay dia tsy ankanavaka, mandritra ireo andro ireo ny fandefasana entana dia feno ihany koa. Tamin'ny faran'ny ...
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny indostrian'ny fitaovam-panafody any Sina amin'ity dingana ity?
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, niaraka tamin'ny fampivoarana haingana ny indostrian'ny fanafody, ny indostrian'ny fitaovam-panafody koa dia nanolotra fotoana fampandrosoana tsara. Vondronà orinasa mpanamboatra fanafody famokarana fanafody no mamboly lalina ny tsena anatiny, raha ...